China Carbide Rotary Burr SB Shape -Cylinder Shape amin'ny End Cut mpanamboatra sy mpamatsy |Xinhua
Carbide Rotary Burr SB Shape -Cylinder Shape miaraka amin'ny End Cut
Carbide rotary burr dia antsoina koa hoe carbide high speed cutter, na carbide lasitra cutter, Ampiasaina betsaka amin'ny sehatry ny metaly, fanodinana metaly sns
* Mahay machining variours metaly (anisan'izany ny defferent quenching vy) sy tsy metaly toy ny marbra, jade ary taolana.Miaraka amin'ny hamafin'ny HRC70,.
* Mba hanoloana ny kodiaran'ny fikosoham-bary kely amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra, tsy misy loto vovoka vokarina.,
*Machining tsara kalitao sy avo smoothness mety ho machining isan-karazany bobongolo lavaka amin'ny avo marina;
* Fiainana maharitra, 10 heny ny fitaovana vy haingam-pandeha ary 200 heny ny kodiaran-tsolika kely amin'ny faharetana.
* Mora entina sy miasa.Azo antoka sy azo itokisana, afaka mampihena ny hamafin'ny asa sy manatsara ny toetry ny asa;
* Tombontsoa ara-toekarena avo lenta, mety hisy fihenam-bidy 10% amin'ny vidin'ny dingana feno.
Matetika, ny hafainganam-pandehan'ny fihodinan'ny fitaovana elektrika na pneumatic dia tokony ho 6000-50000 isa-minitra.
Ho an'ny fampiasana azo antoka, ny burrs rotary carbide dia tsy maintsy fehezina tsara mandritra ny fandidiana, mba hisorohana ny famahanana reciprocally, ny fikosoham-bary mivadika dia tsara kokoa.Mba hiarovana ny masonao amin'ny solomaso fiarovana sy hisorohana ny chip tsy hiparitaka amin'ny fotoana iray ihany.
1: Trimming tselatra sisiny, burrs sy welding tsipika fanariana, forging sy welding faritra;
2: Vita ny machining isan-karazany ny metaly lasitra;
3: Vita ny fanapahana ny vane wheel mpihazakazaka;
4: Chamfering, rounding sy channeling isan-karazany ny milina faritra;
5: Vitao ny machining ny endrik'ireo faritra anatiny amin'ny milina;
6: sokitra ara-javakanto ny karazana metaly na tsy metaly rehetra;
Karazam-pamokarana Sary Fampiharana
Single Cut M Ny loha manapaka tokana mahazatra, ny endriny dia tsara, ary ny endriny dia tsara, mety amin'ny fanodinana vy mafy amin'ny hamafin'ny HRC40-60 degre, firaka mahatohitra hafanana, firaka fototra nikela, firaka mifototra amin'ny kobalt, vy tsy misy pentina, sns
Double Cut X Ity endrika fanapahana indroa ity dia manana chip fohy sy vita amin'ny ety ambony, mety amin'ny fanodinana vy, vy, vy amin'ny hamafin'ny HRC60, firaka miorina amin'ny Nikel, firaka mifototra amin'ny kobalta, vy tsy misy vy austenitic, firaka titanium, sns.
Aluminum Cut W Ny endrika fanapahana Aluminum dia manana paosy lehibe lehibe, faran'izay maranitra ary fanesorana chip haingana, mety amin'ny fanodinana aliminioma, firaka aluminium, metaly maivana, metaly tsy ferrous, plastika, fingotra mafy, hazo sy ny sisa
endrika sy karazana Order No. Size Karazana nify
Head Dia (mm) d1 Halavan'ny loha (mm) L2 Shank Dia (mm) d2 Total Length (mm) L1
Endriky ny cylinder miaraka amin'ny karazana fanapahana farany B B0313X03-25 3 13 3 38 X
A: Eny, raha manana fangatahana mazava ianao dia hanome santionany maimaim-poana ho an'ny fitsapana.
F: Inona no fomba welding anao?
A: lasantsy volafotsy, Ity no fomba fanao mahazatra ho an'ny vokatra avo lenta.
A: Manana fepetra ara-dalàna izahay amin'ny tahiry, entana entana 3 andro.Ho an'ny vokatra sutomized, 25 andro.
F: Azonao atao ve ny mivarotra azy ireo ny burrs carbide amin'ny endriky ny akanjo?
A: Eny, manana boaty plastika miforitra izahay, misy endrika fonosana 5pcs / 8pcs / 10pcs
Eny, manana serivisy fanaraha-maso azo antoka ho an'ny vokatra efa namidy izahay.Raha manana fanontaniana ianao dia aza misalasala mifandray aminay.Hahazo serivisy mahafa-po aorian'ny varotra ianao ao anatin'ny 24 ora.
teo aloha: Carbide Rotary Burr SA endrika -Cylinder endrika
Manaraka: Carbide Rotary Burr SC Shape -Cylinder Shape miaraka amin'ny Radius End
Carbide Rotary Burr SL Shape -Taper Shape miaraka amin'ny ...
Carbide Rotary Burr SD endrika -Bola endrika
Carbide Rotary Burr SC Shape -Cylinder Shape amin'ny ...
Carbide Rotary Burr SE endrika -Oval endrika
Carbide Rotary Burr SK Shape -Cone endrika misy 90°